Abaalmarinta Xayeysiinta Lambarka 5 Winter 2018 | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Maya. 5 Winter 2018
Maalinta Safarta Internetka ee Talaadada 6th Febraayo tani waa wax yar oo xusuusin ah sababta aan ugu baahan nahay inaan suulashayada saarno oo ku saabsan dhibaatooyinka ka imaan kara internetka, ugu yaraan carruurta. Daabacaadan qaboobaha ah waxaan ku soo qaadaneynaa wararka ku saabsan - qaabka ganacsiga cusub ee warshadaha galmada si loo bilaabo 'bixinta' dadka si ay u daawadaan jilicsanaanta adag; qaybta baaritaanka cusub ee 'cilladaha dabeecadaha galmada ee qasabka ah' ee ay soo bandhigtay Ururka Caafimaadka Adduunka; isku dayga warshadaha lulataaye si looga leexiyo; fursado cusub oo CPD-ku-habboon; gunta wararka oo ku saabsan sida waddan kale uu ula tacaalayo kufsiga internetka; ku taageerida joojinta iyo Maalinta Jacaylka astaamo gaar ah oo ka farxiya qalbiyadeenna.
Wixii warbixin maalmeed, naga soo socda @brain_love_sex iyo arag boggaga todobaadlaha ee bogga guriga. La xiriir mary@rewardfoundation.org haddii aad jeclaan lahayd inaad maado kasta ku leedahay mawduuceena daboolay qoto dheer.
Isticmaalayaasha la siiyay si ay u daawadaan Porno Hardcore
Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu calaamadeeyay inuu soo bandhigi karo qaybta 'New Edward Behavior Disorder'
Dhiirrigelinta Suuq-geynta Shirkad raadineysa Saameyn Cilmi-baadhis Cusub
Dhibaateynta Galmada ee Goobta Shaqada
Marka ugu horeysa ee Maxkamadaha: Swede oo lagu xiro Kufsiga Carruurta Online
"Maxaan sameeyaa? Dilalka Haweenka ah ee La Yidhaahdo "Nuswada Sawirada" "Cilmi-baaris Cusub
Barida koorsooyinka ugu horreeya ee RCGP-la aqoonsan yahay ee saamaynta Saamaynta Internetka ee Pornography on Mental iyo Physical Health May
Caawinaada kooxda NoFap ee xalinta sanadka cusub
Waxbarashada Dugsiyada - Ardayda Faallooyinka
Sida Loogu Hormariyo Maalinta Jacaylkaaga
Muuqaal internetka ah oo loo isticmaalo in lagu qiimeeyo laba rodol oo ay adagtahay in la galo. Kadibna waxay noqotay mid bilaash ah oo si ballaaran loo heli karo casriga iyo qalabka kale ee internetka. Wargeyska todobaadkan ayaa ah in ciyaartoyda waawayn ee warshadaha porno badan oo dollarka ah ay kor u qaadaan cayaartooda si ay dhab ahaantii 'lacag ugu bixiyaan' dadka si ay u daawadaan porno hardcore, inkasta oo lacagta crypto. Halkan waa sheekada ay maamusho Axadda (4 Feb 2018) taas oo aan ka soo xiganay. Saxafiga ayaa asal ahaan si sax ah noogu tilmaamay inuu yahay 'u ololeynta filimada qaawan ee internetka' laakiin taasi waxaa loo badalay "ka dhanka ah sawirada qaawan ee internetka", iyadoo loo maleynayo in tafatirayaasha hoose. Qeybta ugu hooseysa: weli lacag badan oo loogu talagalay warshadaha jilicsan ee hodanka ah laakiin dhibaatooyin caafimaad oo badan oo la xiriira mukhaadaraadka NHS-ka, dambiyo badan oo galmo ah oo loogu talagalay nidaamka cadaaladda dambiyada culus oo ugu muhiimsan dhammaantood, rabitaan yar oo xiriir dhab ah oo ay weheliso qanacsanaanta galmada guud ahaan.
WHO waxay soo saareysaa buug-tilmaameedka kow iyo tobnaad ee dib-u-habeynta Cudurrada Caalamiga ah (ICD-11) dhammaadka sanadkan. Waxaa u adeegsada xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka adduunka oo dhan inay ku aqoonsadaan dhammaan noocyada cudurrada. Buug-tilmaameedka iyo Tirakoobka ee Dhibaatooyinka Caafimaadka Maskaxda, oo hadda ku jira soo-saarkeedii shanaad (DSM 5, 2013), waa mid la mid ah oo inta badan laga isticmaalo Mareykanka laakiin aan ku badnayn xeebahooda. Maaddaama cilmi-baaris lagu sameynayo aagagga cusub ee cudurku soo kordhayo, gelitaanno cusub ayaa muuqda. Si taas loo gaaro, iyo in la aqoonsado saameynta internetku ku leeyahay dabeecadda iyo caafimaadka, ICD-11 waxay diyaar u tahay inay soo bandhigto dhowr qaybood oo cusub oo khalkhal ah oo ay ka mid yihiin "khalkhalka dabeecadda galmada ee qasabka ah".
Warqad ku jirta Cilmi-nafsiga Dunida (Vol. 17: 1 Feb 2018) oo ay ka soo jeedaan maskaxiyeyaasha muhiimka ah ee ku lug leh horumarinta buuggan cusub, wuxuu qeexayaa sida ay u timid imtixaankan. Waa kuwan soo socda:
"Tilmaamku wuxuu u muuqdaa hal ama dhowr ka mid ah kuwan soo socda: a) Ku lug lahaanshaha dhaqdhaqaaqyada jinsiga ee soo noqnoqoshu waxay udubdhexaad u tahay noloshiisa qofka illaa laga fogaado caafimaadka iyo daryeelka shakhsi ahaaneed ama danaha kale, waxqabadyada iyo mas'uuliyadaha; b) Qofku wuxuu sameeyey dadaallo badan oo guul daraystay si loo xakameeyo ama loo yareeyo dabeecadaha galmada ee soo noqnoqda; c) Qofku wuxuu sii wadaa inuu ku dhaqmo habdhaqan galmo oo ku-celcelis ah inkastoo ay jirto cawaaqib xumo (tusaale ahaan, khalkhalka soo noqnoqda ee xidhiidhka, arrimaha shaqada, saamayn taban) caafimaadka; ama d) Qofku wuxuu sii wadaa inuu ku dhaqmo habdhaqan galmo oo ku celcelisa xitaa marka isaga / iyadu ay yar tahay ama aysan ku qanacsanayn.
Cabashooyinka ku saabsan dabeecada jinsiga ah ee kufsiga ayaa si cad loogu soo bandhigay tilmaamaha ogaanshaha ee loogu talagalay xanuunka. Shakhsiyaadka leh heerar sare oo xiiso galmo iyo dabeecad (sida, jinsiga oo aad u sarreeya) oo aan soo bandhigin kantaroolka gacan ka geysashada dabeecadooda galmada iyo cillad culus ama laxaad la'aan shaqeynaya waa in aan lagu ogaan cilladda jinsi ahaaneed ee qasabka ah. Calaamadaha cudurka waa in aan loo qoondeeynin inay sharxaan heerarka sare ee xiisaha galmada iyo dabeecadda (tusaale, masturbay) oo caadi ahaan ka mid ah dadka qaangaarka ah, xitaa marka ay taasi la xiriirto dhibaatada.
Xeerarka ogeysiinta ee la soo jeediyay ayaa sidoo kale xooga saaraya in jirdil la'aanta habdhaqanka galmada qasab maaha in lagu ogaado iyada oo ku saleysan cillad maskaxeed oo la xidhiidha xukunnada anshaxa ama u diidmada ku saabsan dareenka galmada, dhiirigelinta ama dabeecadaha aan kale loo tixgelineynin calaamadaha cilmi nafsiga. Dabeecadaha jinsiga ah ee kudhaca maskaxda ayaa sababi kara dhib nafsadeed; si kastaba ha ahaatee, dhibaatada maskaxeed ee ay sabab u tahay dabeecadda galmada lafteeda ma sheegi karto cilad muujinaysa cilad maskaxeed oo qasab ah. "
Warshadaha porno badan oo bil walba waxay doonayaan in ay ilaaliyaan faa'idadoodii oo ay qashin lahaayeen fikrad kasta in isticmaalka suufku uu noqon karo mid qasab ah. Ka dib markii Weinstein / Spacey, doodda #MeToo iyo soo jeedinta ICD-11, qodobkan Daily Mail isku dayaa in la dhiso takoorid jinsiga ah iyo takoorka fayrasku wuxuu noqon karaa jirro maskaxeed caafimaad.
Si kastaba ha noqotee kooxaha haweenka ee la dagaallamaya baaritaanka cusub ee soo socda ee "Dhibaatada dabeecadda galmada ee qasabka ah" ee ku saabsan daabacaadda cusub ee la soo saaray ee Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee Qoondaynta Caalamiga ee Cudurrada (ICD-11) ayaa si murugo leh loo majara habaabiyey. Uma baahna cabsi. Baadhitaankan la soo jeediyey MA "ka dayn doono Weinsteins inuu jillaabto." Tani waa barta hadalka ee lagu miiqay mashiinka warbaahinta lulataaye si loo isku dayo in loo kordhiyo iska caabinta ogaanshaha cudurka.
Baadhitaankan ICD-11 wuxuu u oggolaan doonaa dadka isticmaala sigaarka balwadda ah, gaar ahaan dhallinyarada, inay fahmaan inay haystaan ​​dhibaato dhab ah oo ay helaan daaweyn. Waxay sidoo kale u oggolaan doontaa aqoonyahannada inay sameeyaan baaritaan dheeri ah. Qaar ka mid ah cilmi-baarista ayaa la xannibay sababtoo ah "cilladdu kuma jirin buug-tilmaameedka cudurka." Xitaa “Psychology Maanta”Joornaal ku takhasusay cilmu-nafsiga oo kuyaala dalka Mareykanka laakiin si aad ah u aqriso, uma oggolaan doono dadka wax qora inay wax ka qoraan“ maxaa yeelay ma jiraan. ”
Mudaaharaadyadan looga soo horjeedo ogaanshaha cudurka waa kuwo aan sax ahayn Waxaan u baahanahay inaan gacan ka geysano sidii dadka loo bari lahaa. Ciladan cudurku “cudur daar uma noqonayso kuwa ugaarsada.” Dhammaan dadka balwada leh waxay wali mas'uul ka yihiin ficilladooda. Tani waxay khuseysaa dambiyada la xiriira balwado kasta: isqarxin 'sakhraansan' ma ahan difaac. Dheeraad ah, ugaarsato badan ayaan Xitaa xatooyo ahayn. Tani waa jahwareer ula kac ah oo ka mid ah laba dhacdo oo kala duwan… marka luuqada marna laguma dhawaaqin inay tahay mid cuduro leh.
Halkan waa a gabal blog waxaan ku sameynay arrinta.
Guddiga Xuquuqda Aadanaha iyo Guddiga Xuquuqda Aadanaha ayaa wacdiyay shirkadaha FTSE100 iyo ururrada kale ee waaweyn si loogu diro EHRC istiraatijiyadooda yareynta dhibaataynta galmada mustaqbalka. TRF waxay la xiriirtay hay'adaha shirkadaha bixiya tababarka kadeedka galmada marka la eego tan.
Nin wuxuu ahaa lagu xukumay Iswiidhen kufsiga carruurta ee internetka. Waxay macno cusub ugu kordhineysaa fikradda 'ugaarsade qadka' iyo cabir kale oo 'khatarta shisheeyaha' ah. Maaddaama maskaxdooda ay sii yaraato sababtoo ah isbeddelada maskaxda ee maskaxda ku dhaca, rag badan oo badan ayaa kici doona oo raadinaya porno sharci darro ah sida kufsiga nool ee carruurta ee dalbashada. Maxay maxkamadaheenu ka jawaabi doonaan? Maxaan sameyn karnaa si aan uga beddelno isbeddelladan? Bixinta dadka si ay u daawadaan jilicsanaanta jilicsan ma caawin doono. Eeg sheyga koowaad ee kore.
Sexting waa dugsi gaar ah oo dugsiyada gaarka loo leeyahay, gaar ahaan xadka da'da 12-15. Waxaa si joogta ah loola socodsiiyay tan markaan fasallada ku dhexdhexaadineyno ku saabsan caafimaadka, saameynta bulshada iyo sharciyada ee qoraalka. Dhallinyaradu waxay ubaahan yihiin taageerada ugu badan ee suurtogalka ah ee guriga iyo dugsiga ku saabsan sida loola tacaalo xaaladdan. Waa kuwan qaar cilmi baaris cusub ku saabsan arrimo khasab ah oo ku lug leh gaar ahaan gabdhaha.
"Muujinta iyo dirista sawirada naas-nuujinta iyo kuwa aan rasmiga ahayn ayaa weli ah midka ugu horreeya ee ra'yiga ah ee ku saabsan qaan-qarinta. Inkastoo ay cilmi-baarayaashu raadinayaan cawaaqib xumo, haddana wax yar ayaa laga ogaadey caqabadaha ay dhalinyaradu wajahayaan marka go'aan laga gaari karo soo dirista sawirrada. Iyadoo la adeegsanayo xisaabaadka shakhsi ee internetka ee dhalinyarta ah, ayaa daraasaddan waxa ay sahamisay gabdhaha la soo sheegey ee la soo gudbiyay iyagoo sawiro sawiro ah u diraya asxaabtooda. Falanqaynta mawduucyada sheekooyinka 462 ayaa muujinaya in haweenka da'da yar ay heleen farriimo isku dhafan oo u sheegaya labadaba in ay diraan oo ay iska ilaaliyaan sawirrada. Marka lagu daro sawirada sawirada rajada helitaanka xiriirka, haweenka da 'yarta ayaa sidoo kale soo sheegey inay sawirro u diraan natiijada culeyska ah ee raggu u adeegsadaan qaabab joogta ah, xanaaq, iyo hanjabaado. Dumarka dhalinyarada ah ayaa isku dayey inay ku socdaan dabeecadaha dhallinyarada ee habdhaqanka xad-dhaafka ah, marar badanna loo soo bandhigo fulinta. Diidmada waxaa inta badan la kulmay codsiyada soo noqnoqda ama hanjabaadyo. Xeeladaha kale ayaa ka maqnaa sheekooyinka dumarka dhalinyarada ah, taas oo muujinaysa in gabdhaha da'da yar aysan haysan qalab si ay ugu guulaystaan ​​caqabadaha horyaala.
Waxaan ka soo qaybgalay Ururka Ururka Daaweynta Ku-takoorka iyo La-qabsiga (ATSAC) ee London ee Sabtidii 27 January. Waxay cadeeyeen ka qaybgalayaashii, ugu horreyntii waxay ku takhasuseen jinsiyadaha iyo la-taliyayaasha xidhiidhka, in ay jirto baahi weyn iyo rabitaan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan saameynta lidka-ficilka internetka iyo doorashooyinka daaweynta.
TRF waxay ku faraxsan tahay in ay gacan ka geysato baahidaas iyo bixinta aqoon-is-weydaarsiga ugu horeeya ee RCGP-da ee "Saamaynta Saacadaha Filinka ee Internetka ee Caafimaadka Maskaxda iyo Jirka" ee UK. Seminaarada waxaa la qaban doonaa bisha May: 9 May ee Edinburgh; 14 May ee London: 16 May ee Manchester iyo 18 May ee Birmingham. Waxay u furan yihiin xirfadlayaasha nooc kasta oo u qalma dhibcaha 7 CPD. Fadlan faafin ereyga. Faahfaahin dheeraad ah iyo inaad saxiixdo ilaa aad tagto www.rewardfoundation.org.
Haddii ay dhacdo inaad ka maqnayd buug yar oo ay soo ururiyeen kooxda NoFap, halkan waa kuwan Sababaha 50 ee looga joojiyay porn.
Waqtiga aan mashquulnay waxaan ku baranay Dugsiyada 3, Fettes College, College College George Watson iyo St Columba, Kilmacolm. Ardaydu waxay jecel yihiin inay helaan fursad ay ku hadlaan oo ay wax ka bartaan saameynta sawir-gacmeedka internetka ee ku saabsan caafimaadka iyo suurtagalka dembiga. Gabdhuhu waxay guud ahaan rabaan inay wax badan ka ogaadaan xiriirka, wiilasha waxay doonayaan inay ogaadaan xeerarka iyo sida loo helo.
Ardayda fasalka lixaad waxay si gaar ah u daneynayaan inay maqlaan ku-wareejinta kuleejka ama jaamacadda halkaasoo ay jirto kormeer yar oo ku saabsan waqtigooda iyo shaqada. Cilmi-baaristu waxay muujinaysaa in xitaa haddii ay yihiin kuwo xariif ah, awooddooda ay ku xakameynayaan caadooyinkooda internetka waxay keeni karaan natiijooyin tijaabo ah oo liita, waxay hoos u dhigtay waxqabadka jinsiga iyo xiisaha hoos u dhaca xiriirka dhabta ah.
Qaar badan oo ka mid ah kuwa ka qeyb qaadanaya jimicsiga 24-ka saac ee Dijital ah ayaa u arka inay halgan yihiin. Kuwa kale way layaabaan kuwa samayn kara - ardayda badankood waxay maareeyaan saacado kooban ama kama aysan dhibsan inay isku dayaan.
Macallimiinta ayaa la yaabay natiijooyinka daraasadda ee su'aalaha ku saabsan isticmaalka telefoonka iyo qiyaasta celceliska hurdada ay ardaydu ku duuban yihiin. Arday badan ayaa sheegaya in aysan helin hurdo ku filan iyo in ay internetka ku hawlan yihiin gaar ahaan habeenkii iyaga oo ka dhigaya in ay dareemaan "daal iyo daal" dugsiga maalinta xigta.
Waa kuwan qaar ka mid ah faallooyinka ardayda:
"Waa wax laga xumaado, maxaa yeelay waxaan ku fiicnaaday N5 laakiin waxaan la halgamayaa kuwa sare"
“Snapchat 'streaks' waxay noqdeen kuwo waswaas ah, dadku iyaga ayaa ka daneeya iyaga wax walba. Looma baahna runtiina waa wax laga naxo.
"Aad uma isticmaalo warbaahinta bulshada, waxaan ciyaaraa xbox badan."
"Waxaan aaminsanahay in waalidkaygu sameeyey go'aanka saxda ah ee marnaba ii ogolaaneynin inaan telefoonkayga la seexan karo. Taas macnaheedu waa inaanan weligey ku sumoobeyn iftiin buluug ah oo aan si fudud u seexan karo. Hase yeeshee, weli waxaan helaa naftayda si aan toos ah u soo qaadin taleefankayga markii aan "waxba qaban". Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko saameynta digital Detox. "
“Runtii waan ku faraxsanahay waana ku faraxsanahay in qof ugu dambeyn ii sheego inaan ka baxo taleefankeyga. Xitaa ma jecli taleefankayga laakiin waxaan dareemayaa cadaadis kaga imanaya saaxiibbaday oo ah inaan si joogto ah ugu sii jiro… waxaan jeclaan lahaa inaan noqono saaxiibo aan si joogto ah u joogin taleefannadeenna ”
Fiiri boggayaga internetka si aan wax badan uga ogaano annaga barnaamijyada dugsiyada.
Sida xusuusin dhammaan akhristeyaasheena, xiriirka ama aan ahayn, waxaa jira qaar sayniska si uu jacayl u dhaco. Maalinta Valentine's Day ayaa timid 14th Febraayo.